वसन्तपुर डबलीमा आजबाट सामूहिक सत्याग्रह - prawaskhabar
६ साउन, काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरु आजबाट सामूहिक सत्याग्रहमा बस्ने भएका छन् । २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागमा समर्थन जनाउन आम नागरिकको सहभागितामा वसन्तपुर डबलीमा सत्याग्रह हुन लागेको हो ।
सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सकाे आयोजनामा हुन लागेको सत्याग्रह बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म जारी रहने बताइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग राख्दै २२ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि प्रबुद्ध समूहले शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो । ०६२–६३ को जनआन्दोलन र त्यसपूर्व निकै सक्रिय नागरिक समाजका अगुवाहरुले केसीका मागबारे सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए ।